Ihowuliseyili i-PET eprintiweyo yendebe yoMvelisi kunye noMthengisi | ICopak
Indebe yePET eprintiweyo
Ubuncinci be-Order 30,000pcs
Ukuya kuthi ga kwi-6 yokuprinta umbala
- Ixesha lokuKhokela iiveki ezi-2-6
- Ubungakanani obukhoyo: 2oz, 4oz, 8oz, 10oz, 12oz, 14oz, 16oz, 20oz, 24oz, 32oz
Thumela nje ifayile yakho eyiliweyo okanye sinokuyila uyilo lokuprinta kuwe.
I-PET yethu ecacileyo ye-crystal (i-polyethylene terephthalate) yeekomityi zeplastiki ziyakwamkela ukuprinta, oko kuthetha ukuba sinokufikelela kumgangatho ogqwesileyo womgangatho. Zingaprintwa kwindawo ye-1 okanye yesi-2 yemibala yePatone kwaye zinokubonelelwa ngokuzithandela okanye ngeziciko ezinamacala amdaka.
ICustomOM eprintwe PET Cup ungajikisa igama lakho lophawu kubo bonke abathengi. Ngokushicilelwa kombala okuneenkcukacha kunye ne-odolo ezisezantsi, iBrand Cafe yakho ikunika indlela yokuyila kunye nexabiso eliphantsi yokuthengisa uphawu lwakho. IiCOPAKICustomOM eprintwe PET Cup inokusetyenziswa njengeebhotile ze-boba kwivenkile yakho yeti okanye iikomityi zokubhangqa kunye nemixube ye-smoothie, ukubonakala okucacileyo kwekomityi nganye kuya kuqinisekisa ukuba abathengi bakho banembono engenazimpazamo kwizenzo zakho ezizodwa.
Ixesha elide amava
Ngaphezulu kweminyaka eli-10 yexesha lokuvelisa kunye nabathengi abangaphezu kwama-600 abavela kumazwe angaphezu kwama-50, sinokuvelisa ICustomOM eprintwe PET Cup ngokweemfuno zamaqela ahlukeneyo.
Umgca wemveliso Advanced
Umzi mveliso uxhotyiswe ngemveliso yokungenisa ngokuzenzekelayo ephuma phambili indebe yePET eprintiweyo. Ungaqhubeka nokusebenza ngaphandle kokuma inyanga. Kwaye iinjineli zethu zinamava anzulu.
Imigca yemveliso ekrelekrele engaphezulu kwe-10 ngokuzenzekelayo, intshayelelo yenyanga nenyanga ingaphezulu kweetoni ezili-1000 Ke abathengi bakhokela ixesha loku-odola liya kuqinisekiswa.
Oomatshini bethu bokushicilela be-UV-screen banokuqhubekeka ngokuprinta ukuya kuthi ga kwimibala emi-6. Indebe yePET eprintiweyo Kulula ngeCOPAK.
iitalente zabasebenzi abanolwazi olunobutyebi
Abasebenzi bethu banezakhono zokuphulaphula isiNgesi, ukuthetha, ukufunda nokubhala, kwaye banokuqonda iSpanish nesiArabhu. Unxibelelwano alunazithintelo. Nceda uzive ukhululekile ukubonisana
Egqithileyo 12oz eziprintiweyo PET Plastic eyo- 92mm
Okulandelayo: Iikomityi zePlastiki eziPrintiweyo ziSiko
Ndayicoca iKomityi yeKofu
Ezishicilelweyo PET Iikomityi e China